Ọdịnihu Ga-Gụnyere Microsoft | Martech Zone
Ọdịnihu Ga-agụnye Microsoft
Tọzdee, Ọktoba 20, 2011 Tọzdee, Ọktoba 20, 2011 Douglas Karr
Anaghị m ekwupụta Microsoft na Martech Zone. Ọ bụghị ihe ngọpụ n'ihi na ụlọ ọrụ nwere nnukwu akara ukwu ugbua. Na-agwa COO nke LiquidSpace okwu, Doug Marinaro, na izu gara aga na-ekwu okwu na Josh Waldo, Microsoft na - eme ụfọdụ ihe ịtụnanya n’ịtọ ntọala ya na onye nwere azụmaahịa pere mpe. Ntinye ego a na mmalite nke ụlọ ọrụ bụ nke ga-akwụ nnukwu ụgwọ maka Microsoft n'ọdịnihu.
Josh Waldo bụ SMB (Business Small and Medium-sized Business) Onye Ahịa na Onye Ngwọta Onye Mmekọrịta (Ọ bụ ugbu a Onye isi oche nke New Markets na Emerging Channels na Microsoft). Josh kọọrọ m ụfọdụ nọmba nke na-eju anya… Microsoft na-emefu $ 9.5 Ijeri (na B) na nyocha na mmepe ugbu a. Ọbụna ihe na-eju anya bụ na 70 ruo 90% nke mmefu ego ahụ ga-etinyere igwe ojii! Chaị.
Otu ihe atụ nke otu Microsoft si arụ ọrụ na SMB bụ BizSpark.
Iji nyere aka na mmalite nke teknụzụ na-aga nke ọma na ngwanrọ Microsoft, BizSpark na-enye ohere ịnweta obodo nke ndị mmekọ gburugburu ụwa - ndị niile sonyere na-akwado ngwanrọ na-eweta sọftụwia na ọgbọ na-esote nke ndị ọchụnta ego teknụzụ.
Offọdụ n'ime ụlọ ọrụ ibe ha dị ịtụnanya:
Xero aza ajụjụ, ịgba ụgwọ na ichekwa ego na bank software
Gust - ebe imepụta profaịlụ mmalite ma jikọọ na ndị na-etinye ego 35,000.
Mopapp - ngwa iji soro ahia gafee ahia ahia niile.
IwuPivot - a crowdsourced iwu akụ maka ulo oru.
oDesk - saịtị iji jikọọ na ihe ndị ọrụ ntinye na ntanetị maka ihe ọ bụla site na mmepe gaa ọrụ ndị ahịa.
Ghara ikwupụta òtù ndị na-enyere mkpụrụ aka, ịkwado na ịmalite ụlọ ọrụ mmalite. N'ebe a na Indianapolis anyị ahụla ihe ịga nke ọma otu n'ime ndị a - Izu ụka mmalite.
Bizspark abụghị naanị ijikọ azụmaahịa na ego, ngwaahịa ma ọ bụ ndị mmekọ, ọ na-arụkwa ọrụ iji nyere ụlọ ọrụ ndị a aka ịzụ ahịa na mkpa ahịa ha. Banye na ị ga-ahụ ihe ịtụnanya ndepụta nke ihe na akụrụngwa ziri ezi na mpaghara gị iji nyere gị aka na ịmalite azụmahịa na-aga nke ọma. Bizspark na-ejikọkwa ụmụ akwụkwọ na azụmaahịa. Chee echiche banyere nke a… site na-amụrụ ihe na-amalite obere azụmahịa, Microsoft na-enye ulo oru niile enyemaka ha chọrọ. Nke ahụ bụ atụmatụ!
Otu n'ime azụmahịa ndị ahụ bụ LiquidSpace, a kediegwu ngwa nke ahụ wuru na Windows Azure ikpo okwu. LiquidSpace bụ saịtị na ngwa mkpanaka ebe ndị ọrụ mkpanaka nwere ike ịchọta ohere iji rụọ ọrụ, ma ọ bụ n'efu, dị maka awa ole na ole, otu ụbọchị ma ọ bụ karịa. Ekwadoro ngwa mkpanaka ebe, yabụ ịnwere ike ịfe n'ime obodo wee wepụta ohere dị na obere oge.
Ndị ụlọ ọrụ na ndị nwe ụlọ ahịa nwere ụlọ nwere ike itinye nnweta ha na LiquidSpace. Ọ bụ n'efu ma ọ bụrụ na ohere ahụ bụ n'efu. Ọ bụrụ na ohere ahụ na-efu ego, LiquidSpace na-enweta pasent nke ego ha nwetara. Mgbe ya na onye nchoputa LiquidSpace na COO Doug Marinaro na-ekwu okwu, ha sonyeere BizSpark ma were usoro ikpo okwu Azure ozugbo. N’ime izu isii nke ego, LiquidSpace bụ beta. Doug kwuru na ọnụ ahịa ya bụ erughị ụgwọ ekwentị ya.
LiquidSpace nwere ihe karịrị 200 aha edebanyere, ọkachasị na California. Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ 20 na-arụ ọrụ n'etiti Minneapolis na Minsk nwere isi ụlọ ọrụ na Palo Alto. Doug kwuru ihe kacha mma gbasara ikpo okwu yana iso Microsoft rụọ ọrụ bụ na ọ nweela ike ilekwasị anya n'ịzụlite azụmaahịa karịa ichegbu onwe ya gbasara teknụzụ. Ọ tụkwasịrị obi na scalability nke ikpo okwu Azure ga-eso ụlọ ọrụ ahụ too ọtụtụ afọ.
More na Microsoft Azure Platform:
Ọ bụrụ na ejidere gị naanị gị, ihe na-erughị afọ atọ, na-eme ihe na-erughị $ 1M US na ịmepụta sọftụwia… ị nwere ike debanye aha ugbu a maka ndị otu BizSpark gị.
Douglas Karr Thursday, October 20, 2011 Thursday, October 20, 2011
You na-ede ihe site na ebe a na-asa ihe?
Olee otú Mbadamba ụrọ si agbanwe ụlọ ọrụ
Ọkt 23, 2011 na 11:04 PM